Tokyo: Gabadha dalka ku matali doonta tartanka Taekwondo-ga | KEYDMEDIA ONLINE
Tokyo: Gabadha dalka ku matali doonta tartanka Taekwondo-ga
Tartanka Olombikada ee sanadkaan lagu qabanayo Tokyo, ciyaaryahannada Soomaaliyeed ee ka qeyb gali doona, waxaa ka mid ah Muniira Warsame, oo dalka ku matali doonta Taekwondo-ga.
TOKYO, Japan - Daahfurka Ciyaaraha Olombikada ee Tokyo oo ay hadda inaga xigto hal bil oo qura, ayuu dalkeenna Soomaaliya, isku diyaarinayaa inuu ka qeyb galo, waxaana markii ugu horreysay waddanka tartanka Taekwondo-ga (Difaaacu-nafsiga) ku matali doonta gabar.
Ma jiro ciyaaryahan mataleya Soomaaliya tartankaan oo waligiis abaalmarin ku guuleysatay Olimbikada, hayeeshee Muniira Warsame, oo 20 jir ah ayaa dadaal badan ugu jirta inay noqoto qofka ugu horreeya ee taariikh sameeya marka ay ka qeyb galeyso ciyaaraha xagaaga.
Muniira Warsame, oo calanka Soomaaliya geyn doonta Japan, sheegtayna in ay waccdaro ka dhigi doonto tartanka Taekwondo-ga, ayaa ku dhalatay dalka Ingiriiska kadib markii waalidkeed waddanka isaga baxeen Sagaashamaadkii.
Dudley Ricardo waa tababaraha kooxda Taekwondo-ga ee Soomaaliya mataleysa, wuxuu sheegay in kooxdiisu ay si aad ah u diyaarsan tahay inkasta oo aysan haysan dhaqaalihii ay u baahnaayeen.
Taekwondo maahan ciyaar caan ka ah gudaha Soomaaliya, Axmed Ciise, waa gudoomiye ku xigeenka Xiriirka Taekwondo-ga Soomaaliyeed, wuxuu sheegay in Ururku uu wado olole uu ku faafinayo aqoonta ku saabsan Difaacu-nafsiga dalka oo dhan.
Hay'adda Olombikada Soomaaliyeed ayaa sheegtay in ugu yaraan lix ciyaartooy ay dalka ku matali doonaan cayaaraha Tokyo Sanadkaan, kuwaas oo kala matili doona seddex ciyaarood, sida Taekwondo, Feerka iyo tartanka loo yaqaan Track and Field, oo ay hoos tagaan, orodka, bootinta iyo tuuryada.
In ka badan 11,000 oo ciyaartooy, oo ka kala socda daafaha dunida ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan Ciyaaraha Olombikada Tokyo, kuwaas oo dib uga dhacay xilligii loo qorsheeyay kadib markii uu dinada ku baahay cudurka faafa ee Coronavirus.